हनुमानजी र बुद्धको ठुलो भक्त रहेको बाराक ओबामाको खुलासा, दुनियाँ आश्चर्यचकित ! – mero sathi tv
हनुमानजी र बुद्धको ठुलो भक्त रहेको बाराक ओबामाको खुलासा, दुनियाँ आश्चर्यचकित !
On १८ चैत्र २०७४, आईतवार १२:४७
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा माथि भगवान हनुमान जी को कृपा रहेको बताईएको छ । बाराक ओबामा हनुमानजीको निकै ठुलो भक्त रहेका छन् । यति धेरै कि उनी सधैँ जहाँ जाँदा पनि आफ्नो खल्तीमा भगवान हनुमानजीको सानो मूर्ति बोकेर हिड्ने गर्दछन ।
३१ अक्टोबर यानि आज हनुमान जयन्ती(हरेक वर्ष कात्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि र चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिको दिन मनाइन्छ) को अवसरमा आज हामी तपाईलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा र भगवान हनुमान बीचको सम्बन्ध बारे बताउन गईरहेका छौं । एक अन्तर्वार्तामा पत्रकारले उनलाई तपाईले आफ्नो खल्तीमा के-के राख्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए । र उनलाई तत्काल आफ्नो खल्तीमा भएका सम्पूर्ण सामानहरु बाहिर निकालेर देखाएका थिए । यस सन् २०१६ को यो घटना विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पार्ने खालको थियो ।
आफ्नो खल्तीबाट सामानहरु निकाल्ने क्रममा उनले बजरंगबलीको मूर्ति पनि निकालेका थिए । थकित या तनाव महसुस हुने बित्तिकै आफूले हनुमानजीलाई मद्दत माग्ने गरेको कुरा उनले स्पष्ट बताए । उनी यसबाट सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने विश्वास गर्छन । यद्यपि यो अन्धविश्वासी र रुढिवादी सोच नभएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले खल्तीबाट क्याथोलिक चर्चका धर्म गुरु पोप फ्रान्सिसबाट उपहार स्वरूप प्राप्त मोतीको माला, बौद्ध भिक्षुले दिएका गौतम बुद्धको मूर्ति पनि निकालेका थिए । र अन्त्यमा उनले हिन्दुहरुको पूज्य देवता हनुमान जी मूर्ति निकालेका थिए । अन्तर्वार्ताको क्रममा ओबामाले भने म त्यति धेरै अन्धविश्वासी छुइन तर पनि म यी मूर्तिहरुलाई आफ्नो साथमा राख्न रुचाउँछु ।
उनले भने, “जब म थकित वा विचलित महसुस गर्छु तब म आफ्नो गोजीमा हात राखी भगवानको यस समस्याको छिट्टै हल हुने विश्वासको साथ मनमनै प्रार्थना गर्छु ।” उक्त हनुमानजीको मूर्ति एक भारतीय महिलाबाट पाएको उनले बताए । यो गोल्ड प्लेटेड हनुमानजीको मूर्ति अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएकी भारतीय समुदायकी एक महिलाले ओबामाको सफलताको कामना गर्दै उपहार स्वरूप दिएकी थिईन । र उनले अन्त्यमा सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।